भारतका २० सैनिकको निधन पछि चीनले पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतलाइ दियो मुखभरिको जवाफ – Online Nepal
भारतका २० सैनिकको निधन पछि चीनले पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतलाइ दियो मुखभरिको जवाफ
June 17, 2020 1387
एजेन्सी । लद्धाखमा भएको दुई देशको सेनाबीचको घटना बारे चीनले प्रतिकृया दिएको छ । चीनीया विदेशमन्त्री झाओ लिजियानले बेईजिङमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय सेनाले सीमा पार गरेर चीनीया सेनामाथि आ क्रमण गरे पछि जनमुक्ति सेनाले जा’इलागेको बताएका छन् ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने चिनियाँ विदेशमन्त्री लिजीयानले दुबै सेनाकाबीचमा भएको मानवीय क्ष तिबारे केही पनि उल्लेख गरेनन् । जुन ६ मा सैन्य अधिकारी स्तरमा भएको वार्ता र समझदारी बिपरीत भारतीय सेनाले पटक पटक सीमा पार गरे पछि यो घटना भएको लिजियानले बताए ।
दुइ देशका सेना बिचको भि डन्तमा २० जना भारतीय सेनाको निधन भएको थियो भने चीन तर्फ भएको केही बताईएको छैन । उनले भारतीय पक्षबाट सीमा पार हुने ह र्कतले त नाव बढ्ने भन्दै झाओेले सैन्य तथा कुटनीतिक स्तरमा छलफलहरु भईरहेको बताए ।
वक्तव्यमा भनिएको छ: भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच गलवान इलाकामा स’ङ्घर्ष वि राम भएको छ, जहाँ दुवै पक्षबीच १५\_१६ जुनको रातमा भि डन्त भएको थियो। भि डन्त भएको स्थानमा कर्तव्य पालनाका क्रममा ग म्भीर घाइते भएका १७ जना भारतीय सैनिकहरूको शून्य डिग्री सेल्सीअसभन्दा तलको तापक्रम र उच्च हिमाली क्षेत्रमा तिनीहरूलाई लागेको चो टका कारण मृ त्यु भएको छ।
सन् १९६२ को यु द्धपछि पहिलो पटक लद्धाखमा र गत बगेको छ । यो भूमिलाई दुबै देशले आ आफ्नो दा बी गरेका कारण यु द्ध हुने गरेको छ । चीन र भारतबीच ३४ सय किलो मिटर लामो सीमा वि वाद रहेको छ ।
चीनसँगको लडाई मा परी भारतीय सैनिकहरूको ज्या न गएपछि यु द्वको स्थिति बन्ने सम्भावना देखेर नेपालमा छुट्टी मनाइरहेका गोर्खा सैनिकलाई भारतले फिर्ता बोलाएको छ। भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खालीहरू भारतमा कोरोना सं क्रमण बढ्नु अघि नै छुट्टी मनाउन घर आएका थिए। तर, चीनसँग उत्तरी सीमा वि’ वाद चुलिएपछि भारतीय सेनाले छुट्टी मनाइरहेका गोर्खालीलाई काममा फर्कन आदेश दिएको हो।
भारतको रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चीनसँग यु द्धको स्थिति बनेसँगै गो प्य बैठक बोलाएका छन् । जसमा चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपीन रावत र अन्‍य अधिकारीहरु सहभागी छन्। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर समेत बैठकमा सहभागी छन्। सोमबार रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट भारतीय सेनामा भर्ती भएका १८ जना गोर्खा रेजिमेन्ट सैनिकहरु भारत प्रवेश गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
उनले भने, ‘केही दिनयता भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरु भारत जाने क्रम बढेको थियो। आज पनि गइरहेका छन्। आज कति जना गए भन्ने तथ्यांक बेलुका ७ बजेसम्म आउँछ।’ दुई दिनदेखि गोर्खाली सेना नेपालबाट भारत प्रवेश गर्न थालेको भारतीय सञ्‍चार माध्‍यमले उल्लेख गरेका छन्। नेपाल–भारत बोर्डरमा उनीहरूको थर्मल स्क्यानिङ भएको थियो।
Prevकोरोना भाइरस: जीवन रक्षा गर्ने औषधि भेटियो, नेपालमा पनि जताततै सहज र सस्तोमा पाइने !
Nextफेरी भिडे भारत र चीनका सेना, २० भारतीय सहित ३ चिनिया सेनाको ज्या न गयो, अहिलेसम्मकै ठुलो झ’डप (भिडियो सहित्)
७ दिन सम्म गर्नुहोस् यस्तो काम, कहिल्यै हुने छैन पैसाको कमि
भ्रष्टाचार गरेको हैन, सरुवा रोगबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे बोलेको छु,लेखेको छु : डा. पुन
काठमाडौं उपत्यकामा ४४५ सहित आज थपिए १२२८ जना को’रोना संक्रमित
पानीमा भिज्दै रुँदै हिंडेका मजदूर भन्छन ‘चुनाब फेरी आउछ’